Vonjeo ny repoblika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Progresser vers la transition énergétique à travers un changement de comportement il y a 5 jours
Orange Madagascar apporte son soutien au programme de santé ACCESS il y a 7 jours
Orange Solidarité Madagascar soutient le programme ASAMA il y a 8 jours
Airtel Madagascar soutient le retour sur scène de Mage 4 le 19 septembre﻿ il y a 10 jours
Deuxième concertation nationale pour des systèmes alimentaires plus sains, équitables et durables à Madagascar il y a 10 jours
I Platon no nanoratra momba ny « repoblika » nilazany ny fiarahamonina idealy miorina amin’ny rariny sy hitsiny, ny fikatsahana ny soa. Fa maninona ny politika no tsy mampandroso eto amintsika, nefa tsy maintsy ny politika no hitondrana firenena ? Fa maninona no mitrosa be ny firenena nefa mihamahantra, fa izay eo amin’ny fitondrana kosa mihamanan-karena ? Ireo fanontaniana roa ireo no lava-bato maizina iforetantsika, ka na mahita mangirana aza, tsy mahita lala-mazava hivoahana. « Marary ny repoblika e».
Voalohany aloha, lasa ny olona mitondra no « repoblika ». Nanjary olon-tokana no misalotra ny maha repoblika, hany ka very tanteraka ny idealy repoblikanina. Rehefa lasa ny Vazaha ary rehefa noraisin’ny Malagasy ny fanjakana dia niova tsikelikely ny fomba sy rafitra napetrak’izy ireo haha moderina an’i Madagasikara. Azo lazaina ho nikororosy fahana tsikelikely aza : ny rafi-pitantanana, ny asam-panjakana, ny kolontsaina repoblikanina ara-politika, ara-piarahamonina, ara-toe-karena. Nisaloran’ny mpitondra tsikelikely ny atao hoe repoblika. Ny sekoly, ny lalana, ny tranom-panjakana, ny fananana samihafa : nanjary an’ny mpitondra dia homeny ny vahoaka. Miboridana ilay fanjakana repoblikanina fa tsy mahavita zavatra. Ny mpitondra no manam-bola, fa ny firenena mahantra. Ny mpitondra no manao zavatra fa tsy ny repoblika, ny antokon’ny mpitondra no vahoaka, fa tsy ny Malagasy. Dia manompo olom-bitsy ny fanjakana repoblikanina. Hadino ary very ny hasin’ny repoblika amin’ny maha endri-panjakana sy fitantanana azy. Ary dia hadino koa ny « res-publica », ny tena zavatry ny vahoaka.
Azo lazaina fa tsy nahay nandova fanjakana ny mpitondra, hany ka na ny mamelo-maso ny navelan’ny Vazaha aza tsy vitan’ny fitondrana milaza ho repoblika. Na ny fikojana ireo hany navelan’ny Vazaha aza tsy vita intsony : lalana, sekoly, hopitaly, asam-panjakana, fanabeazana, fambolena, tohodrano sy herin’aratra…. Sahirana isika. Sasatra mitrosa, fa tsy tafarina. Mitsipozipozy ny firenena satria tsy zakan’ny fanjakana repoblikanina.
Ary ny faharoa dia lasa nanompo olona sy sarangan’olona ilay repoblika. Finaritra èry ny avy amin’ny faritra miteny hoe « tsy lany olo-manga ny faritra fa be ny zanaky ny faritra ao amin’ny fitondrana : avy any Matsiatra ambony, Amoron’ny Mania, Androy, Vatovavy, Fitovinany, Melaky…mirehareha fa manana olona anaty fitondrana. Kinanjo, olo-manga manompo olona fotsiny ireny. Ny handrefesana fa tsy lany olo-manga ny faritra dia ny fahitana fa mitodika amin’ny faritra niaviany ny zanany. Raha repoblika roa na telo izy teo amin’ny fitondrana ihany nefa ny faritra Kere lava, ny lalana lasa dobo filomanosana, ny sekoly lasa fierem-borondolo, ny hopitaly fiafenan’ny dahalo dia olom-bodo izany nanandevo tena amin’ny fomba moderina. Tsy mahay mizaka soatoavina repoblikanina. Reharehan’ny zanaky ny repoblika voalohany na ireo ray aman-drenin’ny fahaleovantena, ireo sekolim-bahoaka maro satria namolavola olona repoblikanina, toa ny Lisea Jules Ferry Faravohitra na Gallieni Andohalo, na JJ Rabearivelo, Analakely, ny lisea Rabemananjara, ny Lisea Raherivelo….. Nirehareha ny mpianatra niofana tao amin’ny Ecole Le Myre de Villers. Saingy ankehitriny, toa vilian-tsahona ny maro. Tsy mitondra idealy repoblikanina ny sekolin’ny zana-bahoaka. Tsy manana kolontsaina repoblikanina intsony ireo mitondra firenena. Nirehareha anefa ny zanaky ny repoblika fahiny. Ary zary lova ny fomba repoblikanina.
Sao dia vilian-tsahona ny repoblikantsika, ny lazany ro manehoneho madigna ! Mila vonjy ny repoblika mba tsy ho takalon’ainan’ny politika tsy repoblikanina.
Taranja ady totohondry : Nahazo mpanazatra sy mpitsara vaovao ny teto Analamanga - il y a 22 heures
Tantara : Zava-dehibe amin’ny fampandrosoana ny fananana tahirin-kevitra - il y a 3 jours
Matoan-dahatsoratra : Tsikoninkonina amin’ny fiainam-pirenena ! - il y a 26 jours
Matoan-dahatsoratra : Trotraka fa tsy milefitra ! - il y a 1 moi